देउवाका ‘सामन्ती सारथी’ बीच भाँडभैलो | My News Nepal
देउवाका ‘सामन्ती सारथी’ बीच भाँडभैलो
नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक र समाजवादी पार्टीको सभापति भएका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सामन्ती संस्कार, व्यवहार र कार्यशैलीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको पालिस लगाएर देउवाका हरेक कार्यको गुणगान गाउँदै आएका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यबीच पदाधिकारी पाउन तँछाड मछाड शुरु भएको छ ।
पद, पैशा र पावरका लागि मरिहत्ते गर्ने शेर गणका अुनयायी झैं देउवाको गुटमा लागेका केन्द्रीय सदस्यहरु एकले अर्कोको कमजोरी यतिवेला सामाजिक सञ्चालमार्फंंत सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । देउवा गुटमा रहेका पूर्णबहादुर खड्का, प्रदीप गिरी, भिष्मराज आङ्दम्वे, विश्वप्रकाश शर्मा, मिन विश्वकर्मा जस्ता क्षमतावान र योग्य विवेकशील नेतालाई छोडेर बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरु सबै कि त देउवाको या त विमलेन्द्र निधिको भक्तको रुपमा देखा परेका छन् ।
लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा बिलय गरेका विजयकुमार गच्छदार र प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको कार्यबाहक सभापति भएका गोपालमान श्रेष्ठहरु भने देउवाको गलगाँडको रुपमा देखा परेका छन् । देउवाको निवासमा बिहानदेखि साँझसम्म जीउ हजुरी नगर्ने खड्का, गिरी, शर्मा र विश्वकर्मा वाहेक अन्य सबै देउवा गुटका नेता भजनमण्डलीको रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
देउवालाई ३२ नै लक्षणले युक्त भएका नेता भन्दै चाकडि गर्नेहरुमा गोपालमान श्रेष्ठ, एनपी साउद, बालकृष्ण खाँड देखिएका छन् । देउवाभन्दा डा. आरजु राणको चाकडी र चाप्लुसी गर्ने लाईनमा एक नम्वर डा. प्रकाशशरण महत देखिएका छन् भने दोश्रो, तेश्रो, चौथो र पाँचौंमा क्रमश ज्वाईंहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मोहनबहादुर बस्नेत, रमेश लेखक र किशोरसिंह राठौर छन् ।
आरजुको चाकडीमा लम्पसार पर्ने अन्य नेतामा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदय राणा, महेन्द्र यादव र बीरबहादुर बलायर देखिएका छन् । देउवाको नजरमा राजनीतिक कार्यक्षेत्रमा काउछोको व्यवहार गरेका महेन्द्रनारायण निधिका छोरा बिमलेन्द्र निधिलाई उपसभापति बनाउन लागेका छन् ।
तर, काउछो भनेर टिप्पणी गर्ने देउवाले आफू प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको सभापति हुँदा जेल परेपछि कार्यबाहक सभापति भएर सहयोग गरेका गोपालमान श्रेष्ठ र गच्छदारलाई भने उपसभापति नबनाउने भएका छन् । निधि जतिसुकै देउवाको आदेशपालकको रुपमा नभए पनि पार्टी संगठन बुझेको हुनाले श्रेष्ठ र गच्छदारलाई पन्छाउन बाध्य भएका छन् ।
गच्छदार र श्रेष्ठले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा क्रमश चार घण्टा र तीन घण्टा बोलेपछि देउवाले पनि दर्जनौं पटक हाई काड्नु परेको थियो । आफ्नै गुणगान र योगदानको प्रशंसा गरेर नथाक्ने ७० बर्ष उमेर काटेका बृद्ध नेताको दृष्टिकोण र योजना केही सुन्न नपाएपछि देउवा दुवै नेतालाई व्यवस्थापन नगरे आफूलाई गलगाँड झैं भारी बोक्नु पर्ने गुनासो गरेका छन् ।
देउवाले निधिको व्यवस्थापन गर्न सजिलो भए पनि महामन्त्रीको व्यवस्थापन गर्न भने अझै सकेका छैनन् । स्वच्छ छबि बोकेका इमान्दार र स्वर्गीय खुमबहादुर खड्का गुटका केन्द्रीय सदस्यहरुले समेत पूर्णबहादुरलाई समर्थन गर्ने भएपछि देउवा उनैलाई नियुक्ती गर्न चाहन्छन् । तर, देउवालाई आरजुले पूर्णबहादुरलाई नियुक्त नगर्न दबाब दिएकी छन् ।
आरजुले भिनाजु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई महामन्त्री नबनाए ठीक नहुने चेतावनी दिएकी छन् । आफूसँग सल्लाह नगरी यसअघि प्रवक्तामा विश्वप्रकाश शर्मालाई नियुक्त गरिएको भन्दै चिढिएकी आरजुले भिनाजु कार्कीलाई महामन्त्री नदिए डा. प्रकाशशरण महतलाई सहमहामन्त्री बनाउन दबाब दिएकी छन् । देउवा सहमहामन्त्रीमा मानबहादुर बिश्वकर्मालाई बनाउन चाहन्छन् ।
असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले भने पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्य र नविन्द्रराज जोशीमध्ये एकलाई सहमहामन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले भने आफ्नो सिफारिसमा एक जनालाई सहमहामन्त्री बनाउन सभपाति देउवालाई दबाब दिएका छन् । उनले डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाललाई सहमहामन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
रिजाललाई सहमहामन्त्री नदिए सुजातालाई उपसभापति दिन प्रस्ताव गरेका छन् । तर, देउवाले महासमिति बैठकमार्फत बिधान परिवर्तन भएपछि महिला कोटाबाट सुजातालाई उपसभापति बनाउने आश्वासन दिएका छन् । कोइरालाकै सिफारिसमा चार नम्वर प्रदेश संसदीय दलको नेतामा कृष्णचन्द्र नेपाली निर्वाचित भइसकेका छन् । कोइरालाले दिपक गिरीलाई संगठन विभागको जिम्मेवारी दिन माग गरेका छन् तर देउवाले संगठन प्रचार वाहेक गिरीलाई रोजेर अन्य विभागको जिम्मेवारी दिने वचन दिएका थिए ।
डा. आरजुको चाकडी नगरी देउवासँग सम्वन्ध गाँस्ने भनेर चिनिएका नेविसंघका पूर्वसभापति बालकृष्ण खाँड र एनपी साउद भने कुनै पनि पद नपाउनेमा परेका छन् । खाँडलाई संसदीय दलको नेतामा थन्काइएको छ भने साउदलाई आरजुले कुनैं पनि महत्वपूर्ण पद नदिने कसम खाएकी छन् । आरजुको चाकडी नगरे बापत भिष्मराज आङदम्वे र भरत साहले यसअघिको देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुन नपाएका हुन् । देउवाको अन्धोभक्तको रुपमा यतिवेला सबैभन्दा अघि डा. प्रकाशशरण महत र किशोरसिंह राठौर देखा परेका छन् ।
उनीहरु देउवा वा देउवापत्नीको बिषयमा कसैले टिप्पणी वा असहमति व्यक्त गरेमा कुट्न जान समेत पछि पर्दैनन् । केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा महत, राठौर र शंकर भण्डारीले आफ्नो वा देउवाको धेरै बिरोध गर्ने केन्द्रीय सदस्यबिरुद्ध पाखुरा सुर्कने गरेका छन् । महतले नारायण खड्कासँग र राठौरले शर्माबिरिुद्ध पाखुरा सुर्केका थिए ।
देउवाको सरकारलाई निरंकुसको शासनको उपमा
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालपछि निरंकुस शासन प्रणाली लागू गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । चैत ९ देखि बैशाख १५ गतेसम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको निर्णय नम्वर एकमा माओवादी विद्रोहको बहानामा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई अपदस्त गरी निरंकुस साशन प्रणाली लागू गरेको बताइएको छ ।
सो निर्णयमा राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को घटनाप्रति कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि देउवालाई सरकारबाट हटाएपछि निरंकुस शासन प्रणाली लागू गरेको भनिएको छ । देउवालाई २०५९ साल असोज १८ गते प्रधानमन्त्री पदबाट असक्षम भन्दै हटाएका थिए । तर देउवा २०६१ सालको शुरुमा पुनः ज्ञानेन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेका नेताहरु समेत प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
तर, देउवा आफै प्रधानमन्त्री भएको सरकारको समयलाई निरंकुस शासन प्रणाली लागू भइसक्यो भनेर आफैले सभापतित्व गरेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । भरत साह, मानबहादुर विश्वकर्मा जस्ता नेतालाई अवसर नदिए देउवा गुटलाई छोड्ने भएका छन् ।
देउवालाई १३ औं महाधिवेशनमा सहयोग गरेका अर्जुननरसिंह केसी, कुलबहादुर गुरुङ, चन्द्र भण्डारीले देउवालाई यसअघि नैं छोडिसकेका छन् । कर्मचारी यूनियन, शिक्षक संगठन आदिमा नराम्रोसँग पराजय बेहोरेको देउवा गुटले आगामी महिना हुने टेड युनियन कांग्रेसको निर्वाचनमा समेत पराजय हुने निश्चित भएको छ ।
भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा आफ्नो गुटलाई जिताउन जति पनि पैशा खर्च गर्न पछि नपर्ने भन्दै देउवाले यतिवेला बिनोद चौधरी र उमेश श्रेष्ठलाई खर्चको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसअघि देउवाले शिक्षक संघमा पनि यसरी नैं केन्द्रीय सदस्यहरुको खल्ती भरेर पठाएका थिए । उनका गुटका नेता सौराहाको रेष्टुरेण्ट ढलेपछि पौडेल र सिटौल गुटले देउवा गुटलाई बढारेको थियो ।